अष्ट्रेलियावासी विजयलगायत भरतपुरका युवाको सपना– गुट्खामुक्त भरतपुर महानगर – Nepal Reports
Home News Nepal अष्ट्रेलियावासी विजयलगायत भरतपुरका युवाको सपना– गुट्खामुक्त भरतपुर महानगर
चितवन । अष्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष नेपाली युवा विजय सापकोटा नेपाल आउँदा गृहनगर भरतपुर पुगे । युवाहरूसँग एउटा सोचको विकास गरे र अभियानमा सक्रिय भए । अभियान थियो– गुट्खामुक्त भरतपुर महानगर !
सहरको सौन्दर्यताको ह्रास गरिरहेको गुट्खाले युवाको स्वास्थ्यमा पनि भयानक असर गरिरहेको देखेपछि यो सोचको विकास भएको थियो । ‘सहर सौन्दर्यताका लागि यो सोचको विकास गरेका हौं । हामी सक्रिय नभए कसले गर्न सक्छ भन्ने लागेरै यो अभियानलाई सक्रियता दिनका लागि नेपालमा साथीहरू सत्रिय हुनुहुन्छ ।’, सापकोटा भन्छन्,‘यो अभियानले गति पाएको छ ।’
वास्तवमा गुट्खामुक्त सहरको अभियानले अहिले सक्रियता पाएकै छ । यो सक्रियताको नेतृत्व भरतपुरमा युवा भोजराज कँडेलले गरिरहेका छन् भने सयौं युवाको स्वतस्फूर्त सक्रियता रहेको छ ।
यो युवा समूहले भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहाललाई भेटेर अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि गुट्खामुक्त महानगर घोषणाका लागि आग्रहसहितको दबाब दिएको थियो ।
मेयर दाहाल पनि युवाको यो सोचसँग सहमत भएका कारणले आफूले अभियानलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिन पछि परिनन् । ‘हामी युवाले महानगरको सुन्दरताका विषयमा सोचेनौ भने कसले सोच्ने ? त्यसकारण यो अभियानलाई अघि बढाइरहेका छौं ।’, कँडेल भन्छन्,‘यो एउटा अभियानले सफलता पाउनासाथ हामी अन्य अभियानको प्रभावकारीताका लागि काम गर्दै जानेछौं ।’
युवाको स्वतस्फूर्त सहभागीताका लागि कँडेललगायतको एउटा ‘वे’ ग्रुप पनि छ । यो ग्रुप सामाजिक सञ्जाल फेसबुकदेखि स्थानीय तहमा पनि सरोकारका मुद्दामा सक्रिय रहेको छ ।
महानगरका सरसफाई, वातावरणका विषयमा पनि सक्रिय रहेको यो ग्रुपको अहिलेको प्राथमिकता गुट्खामुक्त महानगर बनाउने नै हो ।
यो ग्रुपको समर्थनमा गएको विहीबार महानगरलाई गुट्खामुक्त बनाउनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय वासिन्दाले प्रदर्शन पनि गरे ।सूर्ती, खैनी, गुट्खाले स्वास्थ्यमा असर पार्नुका साथै जताततै फोहोरसमेत हुने भएकाले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनपर्ने माग गर्दै स्थानीयवासीले भरतपुरमा प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका थिए ।
फेसबुकबाट गठित ‘वे ग्रुप’ नामक संस्थाको संयोजन तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागितामा नगरपालिका अगाडि प्लेकार्डसहित स्थानीयवासीले प्रदर्शन गरेका थिए ।
‘सातामा एक दिन एक छिन् समाजका लागि’ भन्ने नारासहित सरसफाइ अभियान चलाउँदै आएको वे ग्रुपको लक्ष्य सुन्दर महानगर नै रहेको कँडेल बताउँछन् ।
यो एउटा सामाजिक अभियान रहेका कारण कुनै पनि राजनीतिक प्रभाव भन्दा पनि जनताको समस्याका लागि स्वतन्त्र समुहका रूपमा सक्रिय रहेको कँडेलको दाबी छ । यस्तो अभियानका लागि पकेट मनीको उपयोग गरिरहेको ग्रुपले आफ्नो ठाउँ आफैं बनाउने दायित्वबाट पन्छिन नहुने भएकाले अभियानलाई सक्रियताका साथ अघि बढाइरहेका हुन् ।
यसअघि उक्त समूहले गुट्खामुक्त गर्न दबाबस्वरूप हस्ताक्षर अभियान चलाएर स्थानीय प्रशासनलाई बुझाएको थियो । गुट्खाले मानव स्वास्थ्यमासमेत असर गर्ने भएकाले हाम्रो ध्यान यसतर्फ तानिएको भरतपुरका अर्का अभियान्ता तथा नेपालमैत्री समाजका जिल्ला अध्यक्ष विरेन्द्र पौडेलले बताए ।
वे ग्रुपको सक्रियताका कारण महानगरले सम्मान पनि गरेको थियो । महानगरको परिषद्का क्रममा प्रमुख अतिथि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्मान गरेका थिए ।
tags: अभियान गुट्खामुक्त
previous धामीको भर पर्दा चारको मृत्यु
next चिसोले ५ को मृत्यु